Biodigesters any ambanivohitra Arzantina | Green Renewable
La Arzantina Izy io dia iray amin'ireo firenena manana fanitarana lehibe indrindra sy fampandrosoana ara-toekarena eo amin'ny sehatra.
Fa toy ny any amin'ny ankamaroan'ny firenena, manana faritra mitokana lavitra ny ivon-tanàna, dia matetika no tsy ampy na tsy ampy ny serivisy fototra toy ny serivisy. fahazavana, mandatsa-dranomaso, herinaratra sy rano fisotro.
Manoloana an'io toe-javatra io, am-polony taona vitsivitsy izao, biodigesters any amin'ireny faritra ambanivohitra ireny. Ny fampiasana an'ity haitao tsotra nefa mahomby ity dia mitombo be.
Tombanana fa manerana an'i Arzantina dia misy maherin'ny 50 ny biodigesters nozaraina amin'ny toeram-piompiana ronono, fiompiana kisoa, sahan'omby ary orinasa indostrialy hafa amin'ny fambolena.
Ny antony mahatonga ny fampiasana biodigesters dia manitatra haingana sy mihabetsaka dia noho ny tombony lehibe ananan'ity teknolojia ity, izay mamela hamokatra mandatsa-dranomaso manafana, hiteraka herinaratra ho an'ny fihinanana fianakaviana sy hamatsiana ny filan'ny fambolena ary koa ny fitrandrahana amin'ny alàlan'ny paompin-drano fisotro ary koa ho zezika.
Tsotra be ny fandidiana ary mora tokoa izy io noho ny habetsaky ny akora vokarin'ireto orinasa ireto toy ny zezika, residues ny vokatra, sns
Tsy lafo ny fandaniana ka safidy mahasoa sy maharitra eo amin'ny lafiny toekarena sy tontolo iainana.
Koa satria mihena be ny habetsahan'ny fako, ny fandefasana ny karbonika y metanina novokarin'ny biby sy zezika voajanahary dia azo ampiasaina amin'ny voly. Ho fanampin'ny tsy miankina amin'ny rafi-serivisy ho an'ny daholobe izay tsy ampy na tsy misy amin'ny sehatra sasany ary manasarotra ny hetsika ara-toekarena.
Ireo rafitra ireo dia mivoatra be any ambanivohitra Alemana sy Brezila noho ny tombony azony sy ny tombontsoa entiny, toy ny herinaratra, biogaz ary zezika mora vidy, ahafahantsika mifaninana amin'ny asa fambolena.
Any Arzantina, ny fironana amin'ny fampiasana biodigesters dia azo antoka fa hitohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » biogaz » Biodigesters any ambanivohitra Arzantina
Tahiry lithium manerantany